Chegharia, taa, n’ezie na Chineke na-akpọ gị òkù ibi ndụ ọhụụ nke amara n’ime Ya | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Chee echiche taa na Chineke na-akpọ gị ka ị bie ndụ ọhụụ nke amara n'ime Ya
O we were ya biakute Jisus, Jisus lere ya anya, si, Gi onwe-gi bu Saimon nwa Jọn; A ga-akpọ gị Sifas ”, nke pụtara Pita. Jọn 1:42
N’ime ihe odide a, onyeozi Andru kpọọrọ nwanne ya nwoke bụ́ Saịmọn gakwuru Jizọs mgbe ọ gwachara Saịmọn na ya ahụwo Mezaịa ahụ. Jizọs nabatara ha ozugbo dị ka ndịozi ma gwazie Saịmọn na a ga-agbanwe aha ya ugbu a. Ugbu a a ga-akpọ ya Sifas. "Sifas" bu okwu Aramaic nke putara "nkume". Na Bekee, a na-asụgharịkarị aha a "Peter".
Mgbe enyere mmadụ aha ọhụrụ, nke a na-apụtakarị na-enyekwa ha ozi ọhụụ na ọkpụkpọ oku na ndụ. Iji maa atụ, n’ọdịnala ndị Kristian, anyị na-enweta aha ọhụrụ n’oge baptizim ma ọ bụ nkwenye. Ọzọkwa, mgbe nwoke ma ọ bụ nwanyị ghọrọ mọnk ma ọ bụ nọn, a na-enyekarị ha aha ọhụrụ iji gosi ndụ ọhụrụ akpọrọ ha ibi.
E nyere Saịmọn aha ọhụrụ nke "Oké Nkume" n'ihi na Jizọs na-ezube ịme ya ntọala nke ụka ya n'ọdịnihu. Ngbanwe aha a na-ekpughe na Saịmọn ga-abụrịrị ihe okike ọhụrụ n'ime Kraịst iji mezuo ọkpụkpọ oku ya dị elu.
Otú ahụ ka ọ dị onye ọ bụla n’ime anyị. Mba, enwere ike ịkpọ anyị ka anyị bụrụ pope ọzọ ma ọ bụ bishọp ọzọ, mana akpọrọ onye ọ bụla n’ime anyị ka ọ bụrụ ọhụụ ọhụụ n’ime Kristi ma bie ndụ ọhụụ site na imezu ọrụ ọhụụ Na, n’echiche, ndụ ọhụụ a ga-eme kwa ụbọchị. Anyị kwesịrị ịgba mbọ kwa ụbọchị iji mezuo ozi ahụ Jizọs nyere anyị n’ụzọ ọhụụ kwa ụbọchị.
Chee echiche taa n’eziokwu na Chineke na-akpọ gị ka ị bie ndụ ọhụụ nke amara n’Onwe Ya, O nwere ozi ọhụrụ ọ ga-arụ kwa ụbọchị, Ọ na-ekwe nkwa inye gị ihe niile ịchọrọ iji bie ya. Kwuo "Ee" na oku ọ kpọrọ gị ma ị ga - ahụ ihe ịtụnanya na - eme na ndụ gị.
Onye-nwe-ayi Jisus, a na m asi Gi “E-eh” na oku I kporo m. Ana m anabata ndụ ọhụrụ amara nke ị kwadoworo m ma jiri ọ acceptụ nabata ọkpụkpọ oku gị nke amara. Nyere m aka, ezigbo onyenwe m, ka m zaghachi kwa ụbọchị maka ọrụ ebube nke ndụ amara nke enyerela m. Jesus ekwere m na gị.